I-Satelital Radioelektric Spectrum | NASSAT
I-Intanethi yiStatellite, iifowuni, i-Multicast, njalo njalo.
Iingcamango ezisisiseko zeSeteleli seTridioelectect Spectrum - iiFree
Xa kuziwa kuma-satellites anxibelelwano, isahlulo somsakazo abasetyenzisiweyo siya kuqikelela phantse yonke into: amandla ombane, amandla kunye nexabiso. Ngoko ke, siya kwenza isishwankathelo esifutshane seenqwelwana eziqhelekileyo ezisetyenziswa kwiinkqubo zeSatellite. Ulwazi olukhoyo kule ngongoma alukho nkcukacha kwaye ezintsha iindaba zivela rhoqo.
Imilinganiselo eyahlukeneyo inezixhobo ezahlukeneyo. Iingqimba zamade omde zihamba ngeendlela ezide kwaye zithintele iingxaki. Imihlaba emikhulu yeengqungquthela inokujikeleza izakhiwo okanye ukuwela iintaba, kodwa ukuphakama kwexesha (kwaye ngoko kufutshane ubude bomda), ngokugqithiseleyo amagagasi anokumiswa.
Xa ubukhulu becala buphakamileyo ngokwaneleyo (sithetha ngamashumi ama-gigahertz), amaza anokumiswa ngezinto ezifana namaqabunga okanye imvula yamanzi, okubangela ukuba into ebizwa ngokuthi "imvula iphelile". Ukuze unqobe le mfuneko kuninzi amandla amaninzi, oku kuthetha ukuthumela amandla okunamandla okanye ama-antenna agxininise ngakumbi, okubangela ukuba intengo yesathelayithi ikhule.
Inzuzo yezikhundla eziphezulu (Ku and Ka bands) kukuba zivumela abathumeli ukuba bathumele ulwazi olungaphezulu ngesibini. Oku kungenxa yokuba ulwazi lufakwe kwiindawo ezithile zomtshangatshi: i-crest, intlambo, isiqalo okanye ukuphela. Ukuzibophelela kwezikhundla eziphezulu kukuba bangakwazi ukuthwala ulwazi oluthe vetshe, kodwa bafuna amandla amaninzi ukukhusela izibhengezo, ii-antenna ezinkulu kunye nezixhobo ezibiza kakhulu.
Ngokukodwa, iinqununu ezisetyenziswa kakhulu kwiinkqubo zeSatellite zi:
Ibanga lokuphindaphinda: 1.53-2.7 GHz.
Iingenelo: iinqununu ezinkulu ezinokuthi zingene kwizakhiwo zomhlaba; bafuna ukuthunyelwa kwamandla angaphantsi.
Iingxaki: ubuncinane bokudluliselwa kwedatha.
Ibanga lokuphindaphinda: kwi-11.7-12.7 GHz yokufumana, kunye nokuhanjiswa kwe-14-17.8 GHz.
Iingenelo: ubude obuphakathi obude obuninzi kwiintsilelo kunye nokuthutha inani elikhulu leenkcukacha.
Iingxaki: ezininzi zeendawo zigwetywe.
Ibanga lokuphindaphinda: 18-31 GHz.
Izinzuzo: ububanzi beendawo ezikhoyo; I-Wavelengths ithwala ubuninzi beenkcukacha.
Iintsilelo: ezifunekayo zithunyelwa; ukukhathazeka kwendalo.
Iinkcukacha zamagama eendidi ezahlukeneyo zamaqela: